पर्यटन क्षेत्रलाई पारदर्शी र चोखो बनाएरै छाड्छु – Vishwanews.com : Popular Nepalese News Media in New York, USA
Home / News / अन्तर्वार्ता / पर्यटन क्षेत्रलाई पारदर्शी र चोखो बनाएरै छाड्छु
पर्यटन क्षेत्रलाई पारदर्शी र चोखो बनाएरै छाड्छु
March 16, 2016 अन्तर्वार्ता Leaveacomment
० प्रेमकुमार राई
सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागकिर उड्डयन मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले आफू मन्त्रालयमा आएको केही समयमै केही परिवर्तन गर्ने संकेत गरेका छन्। उनले मन्त्रालयमा आएको केही समयमै मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीलाई कुनै पनि फाइल बढीमा तीन दिन मात्रै राख्न र नअड्काउन निर्देशन दिइसकेका छन्। पर्यटनमा देखिने गरी काम गर्ने र प्रभावकारी हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको दाबी छ। पर्यटनमा आएपछि उनले गर्ने काम र पर्यटकीय विषयमा उनीसँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः
पर्यटन मन्त्रालयमा आएपछि अनुभव कस्तो रह्यो ?
पर्यटन मन्त्रालय नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण निकाय हो । गाउँदेखि शहरसम्मका हरेक क्षेत्रमा पर्यटन पु¥याउन अहिले आवश्यक छ । यसको प्रवद्र्धन र विकास गरेर पर्यटनलाई बृहत बनाउन पनि आवश्यक छ । पर्यटनले देशको आर्थिक विकासको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यस्तो क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासमा जोड दिनुपर्छ । म यही उद्देश्यका साथ आएको छु र म पूरा गरेर छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । पर्यटनको मूल आधार भनेको आर्थिक विकास हो । नेपालमा रहेको सगरमाथा, पर्यटकीय क्षेत्र र विविध पर्यटकीय गतिविधिको प्रवद्र्धन गर्ने, हिमालदेखि पहाडसम्मको भौगोलिक अवस्था, वातावरण, विभिन्न धार्मिक महत्वका मठ–मन्दिरदेखिका गन्तब्य, जडिबुटी पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । हामीले आर्थिक विकास गर्न पनि पर्यटन क्षेत्रबाट बढी रोजगार सिर्जना गर्न गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारलाई रोकेर नेपालमै पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा लगाउने वातावरण बनाउन सकियो भने पक्कै पनि पर्यटन आर्थिक विकासको मूल खम्बा बन्न सक्छ । यसका लागि हामीले पर्यटकीय ‘प्रडक्ट’ बनाएर बेच्न सक्नुपर्छ । मैले यो विषयमा पनि ध्यान दिएको छु ।
रोकिएका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पहिलो चुनौती छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपालमा पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने भनेपछि यसलाई सहजीकरण अवश्य पनि गर्दै जानुपर्छ । हामीले आवश्यक सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म धेरै नीति बने, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक अभियान पनि घोषणा भएका हुन् । ती विषयले अहिलेसम्म पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा र अपेक्षित लाभ लिन नसकेको अवस्था छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा स्थायी सरकार नहुनु, भएका प्रडक्टलाई बजारसम्म पु¥याउन नसक्नु, बजारीकरण नै कमजोर हुनुसहितका कारण हुन सक्छन् । यसमा बजेटले पनि प्रमुख आधार निर्माण गर्छ । पर्यटनमा रोकिएका र सञ्चालन गर्नुपर्ने सबै काम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर म आफैं लागिपरेको छु ।
पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायसँगको समन्वयमा पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि काम गर्छ । पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटनसँग विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्न सबै जिल्लामा पर्यटकीय गुरुयोजना बनाएर जानुपर्छ । मेरो मान्यता नै कुनै पनि काम नरोक्ने हो । पहिले सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ र नयाँ तथा प्रभावकारी काम पनि गर्दै जानुपर्छ । पर्यटनको बजेट मागका आधारमा मात्रै नभएर आवश्यकताका आधारमा जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
२०७३ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष मनाउन पर्यटन बोर्डले गरेको प्रस्तावको विषयमा के हुँदै छ ?
पर्यटन वर्ष मनाउनु भनेको पर्यटकलाई के दिन सक्छौं र पर्यटकलाई कस्तो गतिविधि दिन सक्छौं भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । आन्तरिक पर्यटन वर्ष मनाउन कुनै आपत्ति होइन । तर, यसका लागि पूर्णयोजना हुनुपर्छ, यसका लागि आवश्यक छलफल सबै पर्यटन सरोकारवालासँग बसेर गर्न सकिन्छ । यो विषयमा म सकारात्मक नै छु । यसले के दिने र कसरी प्रभावकारी पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट भिजन आवश्यक छ । हामीले कुनै पनि ठाउँमा काम गर्दा र पर्यटकीय बजेट खर्च गर्दा पहिले आफ्नो अध्ययन हुनुपर्छ । जस्तै अहिले सातै वटा प्रदेशमा एकएक वटा पर्यटकीय गन्तव्य हुनुपर्छ । सबै एउटै गन्तव्यमा बढी फोकस गर्ने होइन, नयाँ गन्तव्यको प्रवद्र्धन गर्ने र पर्यटकीय ब्राण्ड बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । उपयुक्त योजना र लगानी गन्तव्यका रुपमा पनि हामीले काम गर्नुपर्छ ।
नयाँ मन्त्री वा सचिव आएपछि सधै नयाँनयाँ योजना अगाडि आउने गरेका छन्, तर काम भने हुँदैन किन ?
कुनै पनि मन्त्री, सचिवले आफ्नो मन्त्रालयमातहत भएको कामको जानकारी लिनु, सुधार गर्न खोज्नु र प्रभावकारिता खोज्नु त सामान्य नै हो । तर, कुनै पनि ऐन, नियमअनुसार गरेका कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । सरकारले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम ल्याइरहेका हुन्छन् । त्यसलाई आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । प्रभावकारी काम अगाडि बढाउनुपर्छ । कतिपय तत्काल अगाडि नबढाउँदा पनि हुने कार्यक्रमलाई कम प्र्राथमिकता दिनुलाई काम नै नगर्ने भनेर बुझ्नु भएन ।
निगमको जहाज सञ्ंचालन गर्नुपर्ने विषयको आरोप–प्रत्यारोपलाई कसरी लिनुभएको छ ?
निगमसँग भएकै जहाज पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्दैन भने नयाँमा जोड गर्नुको अर्थ हुँदैन । अहिले निगमको जहाज जम्मा ६ घण्टा चलेको छ यसलाई १२ घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्छ । भएकै जहाज राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्छ र थप ल्याउने तथा नयाँ गतिविधिमा जानुपर्छ भन्ने हो । निगमले कुनै प्लान नै नगरी काम गर्नुभएन । निगमको जहाज १२ घण्टा चलाउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं । जम्मा १४ जना पाइलटले ६ घण्टा मात्रै चलाउन सक्छ । १२ घण्टा सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्ति खोइ ? जहाज आएपछि पाइलट चाहिन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै आवश्यक व्यवस्था किन नमिलाएको ? एयर होस्टेज छैन, पाइलट छैन, जहाज चाहिन्छ भन्ने तर भएकै जहाज पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसक्ने कमजोरी सुधार नगरेसम्म सरकारले सपोर्ट नगरेको भन्नुको कुनै अर्थ छैन । निगम सुधार हुनुपर्छ र सरकारी संस्थाको हितको हुनुपर्छ भनेर सधैं सरकारले भनेको छ ।
यसको मतलब निगम आफैंले सुधार भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
निगमको व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्छ । निगमले आफूलाई नाफामा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ । निगमले जहाज लिने विषयमा निगमले नै तत्परता देखाउनुपर्छ । ‘प्लानिङ वे’मा निगम जानुपर्छ । निगमभित्र अहिले पाँच प्रकारका जहाज छन् । यो पाँचै प्रकारका जहाज सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्ति, दक्ष जनशक्ति तथा प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ भनेर निगमले नै बुझ्नुपर्छ नि त ।
सरकारी पदाधिकारीकै स्वार्थले निगम कमजोर भएको भनिन्छ । जिम्मेवारीचाहिं कसले लिने ?
व्यक्तिगत स्वार्थबाट टाढा रहनुपर्छ । संस्थाको हितका लागि कुनै पनि स्वार्थरहित ढंगबाट काम गर्नुपर्छ । म त एकदम शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ भएको व्यक्ति हुँ । म कुनै पनि काम ढिलो हुनु हुँदैन र आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णरुपले निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति हुँ ।
तपाईं अख्तियारमै काम गरेर आएको व्यक्ति अब पर्यटनमा अख्तियार पस्यो होश पु¥याउ है पनि भन्न थालिएको छ नि ?
पर्यटन शुद्ध र चोखो हुनुपर्छ । पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि कुनै पनि कामको फाइल तीन दिनभन्दा बढी अड्काउन नपाउने गरी काम गर्न मैले निर्देशन दिएको छु । अख्तियारमा बसेर काम गरेकाले मात्रै होइन मेरो मान्यता सबै क्षेत्रलाई पारदर्शी र चोखो बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।